MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဝန်ကြီးချုပ် လဂျွန်ငန်ဆိုင်း အားနေပြည်တော် မှထိမ်းသိမ်းလိုက်ပြီ လော့.... ??
ဝန်ကြီးချုပ် လဂျွန်ငန်ဆိုင်း အားနေပြည်တော် မှထိမ်းသိမ်းလိုက်ပြီ လော့.... ??
Manau poi Ngut ai hte Lajawn Ngan Seng hpe Naypyidaw de shaga la nna dap6hpe gasat nga. နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးသန်းအောင် gaw ဝန်ကြီးချုပ် zawn shara la taw nga ai re lam na chye lu ai.
ကချင် ပြည်သူ အများမှ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်မှု မရှိသေး သော ကြောင့်
ယခု နှစ် တွင် ကျရောက်သော (၆၇) ကြိမ်မြောက် ကချင် ပြည်နယ်နေ့ တွင် ကချင် မနော် ပွဲတော်အား မထည့်သွင်းစေလို၊ မနော် ပွဲ ကျင်းပရန် မသင့် တော် သေး ကြောင်း ကန့် ကွက်နေ သည့် ကြားမှ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ ၊၀န်ကြီးချုပ်လဂျွန်ငန်ဆိုင်း တို့ ဦးဆောင်ပြီး မှ အတင်း အဓမ္မ မနော်ပွဲ ကျင်းပ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် သည်။
မနောပွဲ ကျင်းပ ပြီးသည် နှင့် တစ်ပြိုင် နက် ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် လဂျွန်ငန်ဆိုင်း အား မြန်မာ အာဏာပိုင်များမှ နေပြည်တော်သို့ ဆင့်ခေါ် လိုက်ပြီး ယခုချိန်အထိ ခေါ်ယူထား (အကျယ်ချုပ် သဘောဟု ယူဆရသည်။) ကြောင်း ကို လည်း သိရှိရပါသည်။
ထို့နောက် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးကြီးဦးသန်းအောင် မှ ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကို ယာယီတာဝန်ယူထားပြီး ဖားကန့်မြို့ KIA တပ် ရင်း (၆) နယ်မြေသို့ ကကကြီးညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ရည် ရွယ်ချက် ရှိရှိ ထိုးစစ်ဆင် တိုက် ခိုက်နေ သည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဒါဟာ ကချင် လူထု အပေါ် ဗမာ အာဏာပိုင် များ နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် လဂျွန်ငန်ဆိုင်း တို့ ၏ ပူးပေါင်း လည့် ကွက် လား...။
at 1/18/2015 05:41:00 PM